स्वास्थ्य Archives - Bigul News
साउन ३१, २०७६ Sabin Timilsina
शरीरको तौल धेरै बढ्नु सबै मानिसका लागी एउटा चिन्ताको बिषय हो । मानिसहरु आफ्नो शरीरको तौल नियन्त्रित रुपमा राख्नको लागी विभिन्न खालका उपायहरु अपनाउने गर्छन् । तर पनि उनीहरुको तौल …
आखाको ज्योति कम भएर चस्मा लगाउनु हुन्छ?ज्योति बढाउनको लागि खानुहोस् यी ६ खाने कुरा!
बैशाख २७, २०७५ NK-Bigul Media
पहिलाको जमानामा बुढाबुढीको मात्रै आखाँ कमजोर हुने गर्थ्यो। तर आज-भोलि,यस्ता केहि कारण छन् जसले बच्चा र युवा पनि यो समस्याबाट पिडित छन्। यसको मुख्य कारण कम्प्यूटर, मोबाइल र टीभीमा धेरै समय …
विद्यालयसँग सम्बन्धित यो समाचारले तपाईलाई आश्चर्यचकित पार्नेछ! भयो ठूलो खुलासा!
बैशाख १५, २०७५ NK-Bigul Media
अध्ययनहरूले फेला पारेको छ कि जुन विद्यालयहरू ढिला शुरु हुन्छ,त्यस्ता विद्यालयहरूमा शैक्षिक र अन्य क्रियाकलापको नतिजा राम्रो आउछ। अर्कोतर्फ, जसको पढाइको समय बिहान बिहानै हुन्छ, त्यस्ता बच्चाहरु अधिक आलसी हुन्छन्। जुन स्कूल बिहान ७ …
यी ६ समस्याबाट मुक्त हुन सोयाबीनको प्रयोग गर्नुहोस्।
प्रत्येक दिनको काम र तनावपूर्ण जीवनका कारण हरेक व्यक्ति केही न केहि समस्याले चिन्तित हुने गर्छ। भटमास यस्ता ६ समस्याको अचुक अपाय हो जसले जराबाटै समाप्त गर्दिन्छ। भटमासको छ वटा फाइदाहरू थाहा पाउनुहोस्। …
दूधमा ओखर हालेर यसरि पिउनुहोस्! मिल्नेछ अचम्म लाग्ने फाइदा!
हाम्रो जिबनमा दुधको धेरै ठुलो महत्वपुर्ण छ। यसले तागत त दिनुका साथै यसमा टेस्ट पनि हुन्छ। तर यदि पुरुषका लागी हो भने, तिनीहरूका लागि दूध विभिन्न मांशापेसी र हड्डिहरुको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। विशेषगरी …
लामो कपाल बनाउनका लागि यी खाना
बैशाख ०६, २०७५ NK-Bigul Media
लामो कपालले तपाईको सुन्दरतामा सुगन्ध थप्ने काम गर्छ।प्रत्यक केटीले लामो कपाल चाहन्छन्। जसको लागि उनीहरुले धेरै प्रयासहरू पनि गर्ने गर्छन्। तर केवल प्रयास मात्र पर्याप्त हुदैन। यो बाहेक सन्तुलित खानपानको …
यस्ता छन् दाह्री पाल्नुको फाइदाहरु
पुष २५, २०७४ DS Bigul News
आज भोलि दाह्री पाल्नु फेशन नै बनेको छ । अझै पनि दाह्री पाल्नु कतिपयको दृष्टिकोणमा नराम्रो मानिन्छ । दाह्री पाल्नु फेशनको रुपमा मात्र नभई यसलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो एकदम फाइदाजनक मानिएको …
आखिर किन रक्सी पिएपछि कुनै पनि भाषामा कुरा गर्न सजिलो हुन्छ? यस्तो छ कारण!
साथीहरूसँग तपाई पनि पार्टी गर्नुहुन्छ होला। विशेषगरी कतिपयको पार्टी रक्सी बिना अधुरो हुन्छ। सबै साथीहरू रक्सी पियर मस्त रक्सीको नशामा हुदा उनीहरुको बोल्ने हाउभाउ वा बोल्ने शैलि नै फरक र रोचक खालको …
तपाईको यी ७ बानीहरु किड्नीका दुश्मन!
हाम्रो शरीरमा रगतको सफा गर्ने, हर्मोन बनाउने, खनिज बनाउने, खनिजको अबशोषण, पिसाब बनाउने, विषालु तत्व (टोक्सिन) निकाल्ने र एसिडलाइ सन्तुलनमा राख्ने जस्ता सबै महत्वपुर्ण काम किड्नीले गर्ने गर्दछ। त्यसैले हाम्रो शरीरको मुख्य भाग किड्नी हो …
मिलन फाउण्डेशनले पर्वतको आर्थरमा निःशुल्क आँखा शिविर गर्ने
रूद्र श्रीसमगर पोखरा । मिलन फाउण्डेशन नेपालले पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१४, आर्थर डाँडाखर्कमा एक दिने निःशुल्क आँखा शिविर आयोजना गर्ने भएको छ । हिमालय आँखा अस्पताल, घारीपाटन, पोखराको प्राविधिक सहयोगमा यही पुस २२ …